IPL Final : मुम्बईले दिल्लीलाई पराजित गर्दै आईपीएल जित्नसक्ने ५ कारण – WicketNepal
WicketNepal Staff, २०७७ कार्तिक २५, मंगलवार ०९:३७
उत्कृस्ट लयमा देखिएको डिफेन्डिङ च्याम्पियन मुम्बई इन्डीएन्स आईपीएलको पाँचौ पटक उपाधि जित्ने प्रमुख दावेदार टिमको रुपमा रहेको छ। रोहित शर्मा कप्तानीको टिमले पहिलो क्वालिफायरमा दिल्ली क्यापिटल्सलाई ५७ रनले सहजै पराजित गर्दै आईपीएल १३ को फाइनल प्रवेश गरेको थियो।
रोचक कुरा पुनः अर्को पटक दिल्ली क्यापिटल्ससंगनै प्रतिस्पर्धा गर्दैछ जसले दोश्रो क्वालीफायरमा सनराइजर्स हैदरावादलाई १७ रनले पराजित गर्दै इतिहासमै पहिलो पटक फाइनल यात्रा गर्न सफल भएको थियो।
यो लेखमा आईपीएल २०२० को उपाधि मुम्बईले जित्दै उपाधि रक्षा गर्नसक्ने ५ प्रमुख कारणहरु प्रस्तुत गर्दैछौँ –
१. लिगकै उत्कृस्ट मध्येको बलिंग आक्रमण
मुम्बईले ४ वटा आईपीएल उपाधि जित्नु पछाडीको प्रमुख कारण मध्येको एक उत्कृस्ट बलिंग आक्रमण पनि हो। अझ विशेषगरि टिमको पेस बलिंग सर्वोत्कृष्ट हुने गरेको छ। यो सिजन पनि जस्प्रित बुम्राह र ट्रेन्ट बोल्ट सबै टिमको लागि खतराको घन्टी सावित भएका थिए। दुवै पेसरले पावरप्ले र डेथ ओभरमा बिपक्षी टिमको ब्याट्सम्यानको सातो लिएका थिए। बुम्राहले २७ तथा बोल्टले २२ गरि दुवैले यो सिजन कुल ४९ विकेट आफ्नो नाम गरेका छन् जुन प्रतियोगिताकै कुनै पनि जोडीको सर्वाधिक विकेट हो। यस्तै टिमका स्पिनर राहुल चाहरले पनि आफुलाई अब्बल दर्जामै राखेका छन्।
२. उत्कृस्ट माथिल्लो क्रम
मुम्बई इन्डीएन्ससंग क्विन्टन डीकक र रोहित शर्माको रुपमा मजबुत ओपनिंग ब्याट्सम्यान रहेका रहेका छन् जसले टिमलाई उत्कृस्ट सुरुवात दिलाएका छन्। रहित फेल भएको खण्डमा पनि सुर्यकुमार यादवले अघि बढेर रोहितको अनुपस्थिति महसुस हुन दिने गर्दैनन्। धेरै रन बनाउने सुचीमा शिर्ष-५ स्थानमा रहेका डीककले १५ खेलमा ४८३ रन बनाइसकेका छन् भने सुर्यकुमार यादवले ४६१ रन बनाएका छन्।
इशान किशन, काईरन पोलार्ड, हार्दिक पान्ड्या, क्रुनाल पान्ड्या जस्ता ब्याट्सम्यानहरुको उपस्थितिमा टिमको ब्याटिंगमा गहिराइ छ। उत्कृस्ट लयमा रहेका किशनले १३ खेलमा ४८३ रन बनाएका छन्। सबै ब्याट्सम्यानहरु आक्रामक सट खेल्न हरदम तयार रहने गर्छन् र जस्तोसुकै परिस्थितिमा खेलको नतिजा परिवर्तन गर्न सक्षम छन्। अझ हार्दिक र पोलार्डको निरन्तरता पनि गजबको छ। हार्दिकले १८२.८९ तथा पोलार्डले १९०.४४ को स्ट्राइक रेटले रन बनाईरहेका छन् भने यो जोडीले कुल ४७ छक्का हिर्काइसकेका छन्।
४. मजबुत भारतीय खेलाडीको समूह
मुम्बईसंग सधै मजबुत भारतीय खेलाडीहरुको समूह हुने गरेको छ जो टिमको सफलतामा प्रमुख साझेदार हुने गरेका छन्। यो वर्ष पनि रोहित शर्मा, जस्प्रित बुम्राह, पान्ड्या दाजुभाइ, सुर्यकुमार यादब, इशान किशनले टिमको लागि जिम्मेवारी राम्रोसंग निभाएका छन्। विदेशी खेलाडी ४ जना मात्र राख्न पाइने हुँदा टिमको सफलताको लागि बलियो भारतीय खेलाडीहरु हुनु जरुरिछ जसमा मुम्बई अघि रहेको छ।
मुम्बईले ४ पटक आईपीएल उपाधि जितीसकेको छ जो दबाबमा राम्रो खेल्न सक्छ। टिमसंग रोहित शर्मा, ट्रेन्ट बोल्ट, जस्प्रित बुम्राह, काइरन पोलार्ड, हार्दिक पान्ड्या, क्विन्टन डीकक जस्ता अनुभवी खेलाडीहरु पनि रहेका छन्। रोहितले प्रत्येक उपाधि जित्दा कप्तानी सम्हालेका छन् भने अन्य सबै खेलाडीसंग फाइनलको अनुभव छ।
मुम्बईले २०१३, २०१५, २०१७ र २०१९ गरि ४ पटक आईपीएल जितीसकेको छ। २०१० मा चेन्नाईसंग एक पटक मात्र फाइनलमा मुम्बई पराजित भएको थियो।